Nke a bụ ụzọ 6 nke ngwa ngwa ekwentị na-enyere aka na azụmaahịa azụmahịa | Martech Zone
Dika ihe eji eme ihe eji eme ihe na ibelata oge mmepe ma kwusi ugwo mmepe, ngwa mkpanaka na-aburu ihe kwesiri ka otutu ulo oru weputa ihe ohuru. Iwulite ngwa nke aka gi adighi efu ego ma dikwa ike dika odi otutu afo gara aga.
Fueling the industry bụ ngwa mmepe ụlọ ọrụ na dị iche iche ọpụrụiche center na asambodo, niile ike ike na-ewu azụmahịa ngwa nwere ike ghaghị mmetụta akụkụ nile nke azụmahịa gị.
Etu ngwa egwu eji akwalite azụmahịa gị
Gbatịrị Onye Ahịa Gị - never maghị ma ọ bụrụ na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ mpaghara gị ga-aghọ ihe egwu na mba dị anya. Ngwa ụlọ ahịa mkpanaka dị egwu, ngwa mkpanaka akọwapụtara nwere ike ịkwalite uto mba ụwa maka azụmahịa gị. Ọbụghị naanị nke ahụ, ịnwere ike ịmepe ngwa ngwa mkpanaka rụọ oke ala oke ala!
Ebuli Okporo ụzọ na Ama Ọmụma - A bara uru, ịrịba mobile ngwa na-etinye gị ika n'elu uche. Ngwa mkpanaka nwere ike ịkwanye njikọ aka ọ bụla, ọbụlagodi ịkwọ ụgbọala na ntụgharị na ntanetị gaa na weebụsaịtị gị, saịtị ecommerce, ma ọ bụ ọwa mmekọrịta.
Mụbaa Njikọ Ndị Ahịa - ngwa mkpanaka siri ike karịa web ekwentị, na ịnweta ọrụ ọnọdụ, na nso nkwukọrịta n'ọhịa, accelerometers, igwefoto, igwe okwu, na ngwaọrụ biometric. Nke ahụ nwere ike ịnye ụdị mmekọrịta na mmekọrịta.
Streamline ahịa Ọrụ - mee ka ndị na-azụ ahịa na-eguzosi ike n'ihe site n'inye akara ngosi maka nkwado site na ngwa mkpanaka gị. Ma ọ bụ pịa pịa, nkata, nkesa ihuenyo, ọrụ enyere aka, ma ọ bụ vidiyo vidiyo mmekọrịta, ụlọ ọrụ gị nwere ike ịkwalite njikọta ndị ahịa.
Meziwanye ego enwere ike ị nweta - N’adịghị ka brik na ngwa agha dị oke ọnụ, ngwa mkpanaka na-emeghe elekere 24 kwa ụbọchị, ụbọchị asaa n’izu, na ụbọchị 7 n’afọ. Ngwa mkpanaka nwere ike ịnweta obere akpa mkpanaaka, na-enye ụzọ dị mfe iji nye ikike ịzụta.
Ọrụ Ndị Ọrụ - industrylọ ọrụ na-etolite na-ewu ngwa nke ndị ọrụ maka nyocha, akwụkwọ, yana mmekọrịta mmekọrịta. Nke a na-eme ka ihe ọhụrụ dị na azụmaahịa buru ibu site na mbenata nkwukọrịta ma na-egbochi ụzọ mgbochi.
Olee banyere anyị Kechie!
Onweghị onye ga-agọnahụ na ngwa mkpanaaka nwere ike ịkwalite azụmaahịa gị. You nwere echiche maka ngwa mkpanaka?
Tags: mara amaraaka ndi ahiaNdị ọrụ nlekọta ndị ahịaỌrụ Ndị Ọrụịgbatị ndị ahịadịkwuo revenuebulie okporo ụzọmobile ngwangwa mkpanaakammepe ngwa mkpanaakaEgo